Izinsuku zokusungulwa kokudla okuhambisanayo
Ngonyaka wokuqala wokuphila kwengane, isikhathi sokusungulwa kokudla okuhambisanayo kuncike ezimfanelweni zomzimba nezomzimba zomzimba wakhe. Akunconywa ukwethula ukudla okuhambisanayo kuze kube seminyaka eyizinyanga ezingu-3-4 zengane, ngoba ngalesi sikhathi indlela yakhe yokugaya ayilungele ukugaya lolu hlobo lokudla futhi ivele ingene ubisi lomama kanye nokufaka esikhundleni sayo. Ngakolunye uhlangothi, ukwethulwa kokudla okuhambisanayo ngemva kwezinyanga ezingu-6-7 kukhulisa kakhulu ingozi yokuthuthukisa izinkinga ezingekho emntwaneni. Ngokuvamile lokhu kuyimbangela yokuthuthukiswa kwezinkinga ngokusetshenziswa kokudla okunamandla kakhulu uma kuqhathaniswa nobisi lwebele.
Imikhiqizo yokwethulwa kokudla okuhambisanayo
Amajaji kufanele aphethwe ngaphandle kwezinyanga ezintathu zokuphila kwengane. Okokuqala, ijusi kumele linikezwe ngamanani amancane (0.5 tsp), ikhuphuke ibe yi-30-40 ml ezinsukwini eziyisi-5-7 ezizayo. Umthamo wejusi elidliwayo ezinyangeni ezingu-4-5. kungaba 40-50 ml, ezinyangeni ezingu-9-12 ezineminyaka engu-80-100 ml.
I-fruit puree iyinxenye yesibili yokudla okuhambisanayo. Kungangena ekudleni komntwana emva kokusebenzisa amaviki amabili ngesonto eliphumelelayo. Okokuqala, kufanele kube i-pure kusuka kuhlobo olulodwa lwezithelo, isibonelo, i-apula, iplamu, eliphakathi kwe, njll. Khona-ke unganika ingane yakho i-puree emibili yamakhi bese amazambane ahlambulukile evela ezinhlobonhlobo zezithelo.
Imigomo yokwethulwa kwamazambane afihliwe kanje:
I-homogenized - ifanele izingane ezinyangeni ezingu-3.5-5;
I-Puree - eyenzelwe izingane ezingu-6-9 ezinyangeni ezinhlanu;
I-Coarse - yezingane ezinyangeni ezingu-9-12.
Izithelo ze-puree kufanele zinikezwe kuqala i-0.5 tsp, zikhulise ivolumu ezinsukwini ezizayo ezingu-5-7 kuya ku-40 g ngosuku ngosuku lwezinyanga ezingu-4. Uma uneminyaka engu-5 ubudala, inani le-puree lingaba ngu-50 g, ezinyangeni ezingu-9-12 ezineminyaka yobudala-90-100 g. Inani lezinyosi ezigcoke nsuku zonke kufanele lilingane nengane yengane ezinyangeni ezinwetshwa yi-factor 10.
I-puree yemifino ifakwa ekudleni kusuka ezinyangeni ezingu-4.5-5.0. Okokuqala, kufanele kube i-pure kusuka kohlobo olulodwa lwemifino, bese kuthiwa i-puree emibili ye-components, bese ingxube yezinhlobonhlobo zemifino. Okokuqala, ama-pures yemifino ayengezwa i-tsp ngayinye, ekhulisa ivolumu kuya ku-100-135 g ngosuku ngosuku lwezinyanga ezingu-4 ezinsukwini ezingu-5-7 ezizayo. Kusukela ezinyangeni ezingu-5-6. inani le-puree lingaba ngu-150 g, eneminyaka engu-9-12 kuya ku-180 - 200 g.
Ukudoba okusanhlamvu ngesimo se-porridge kuyinto yendabuko futhi kufakwa ekudleni kwezingane kusukela ezinyangeni ezine ubudala. I-porridge yokuqala inikezwa ngenani le-1 tsp, ezinsukwini ezilandelayo ezingu-5-7 eziletha ivolumu ye-porridge kuya ku-150 g ngosuku ngezinyanga ezingu-4 ubudala. Inani le-porridge ezinyangeni ezingu-7-8 lingaba ngu-180 g, ezinyangeni ezingu-9-12 ezineminyaka yobudala - 180-200 g. Owokuqala ukwethula iphariji kusuka kokusanhlamvu okulodwa, bese kuthi kube yizigaba ezimbili, kusukela ezinyangeni ezingu-6 - ezihlukahlukene.
Izitsha zenyama zihluka ngohlobo lwenyama. Yethula ukudla komntwana, ucabange izici zesigamu sakhe sokugaya kanye nesilinganiso sokugaya eminyakeni ehlukene:
izingane ezinezinyanga eziyisithupha ubudala - puree e-homogenized;
izingane ezineminyaka engu-7-8 ubudala - puree puree;
iminyaka engu-9 - 12. amazambane afanelekile;
kusukela ezinyangeni ezingu-11-12 kuya kwezingu-12, izitshalo ze-steam ziyethulwa.
I-puree yenyama isungulwa kusuka ku-5 g, ukwandisa inani lenyama ehlanzekile ezinyangeni ezingu-6 kuya ku-30 ​​g, ngezinyanga ezingu-8-9 kuya ku-50 g kanye nezinyanga ezingu-9-12 kuya ku-60-70 g. Ukulungiswa kwezinwele zezinyama ezinganeni ezingaphansi konyaka owodwa akukhuthazwa ngenxa yokuqukethwe okuphezulu kwemithi yokuqamba. Kusukela ezinyangeni ezingu-8-9. esikhundleni se-meat puree, ungamnika ingane ukudla okudoba (izikhathi ezingu-1-2 ngeviki) kusuka ku-cod, flounder, salmon, njll Kodwa uma ingane ingengozi yokukhulelwa ngokwemvelo (nomlando womndeni), isikhumba sinemibono ye-dermatitis, bese udinga ukungena enhlanzi hhayi ngaphambi konyaka owodwa ubudala.
Lapho uneminyaka engama-5 kuya kwezingu-9 ubudala, ingane kufanele idle ama-30-40 amagremu we-cottage ushizi ngosuku, ezinyangeni ezingu-9-12. - 50 g.
Ukuze uthuthukise amakhono amantombazane, bese kubalulekile ukuba amnike (ama-crackers noma ama-cookies) (ama-5-10 g). Ezinyangeni ezingu-7-8. Yethula ama-5-10 amagremu ngosuku lwesinkwa sesikolweni.
Amafutha omifino, aqukethe ama-acids e-polyunsaturated, anikezwa izingane kusukela ezinyangeni ezingu-4.5, bese kusuka ezinyangeni ezingu-5 - ibhotela.
Isiphuzo esiyinhloko ngamanzi abilisiwe abilisiwe noma isiphuzo samanzi esikhethekile. I-compotes yasekhaya yamajikijolo nezithelo kunconywa ukunikeza ingane eneminyaka engu-1.
Iresiphi yokupheka izingane ezingaphansi konyaka owodwa
Izilwane ezisiza abantu abagulayo
Umthelela wamafoni omakhalekhukhwini nama-laptops empilweni yowesifazane okhulelwe
Ama-eggplant en sauce enhle futhi enomuncu
Ingabe kufanele ngixoxisane nomyeni wami nabangane bami?
Ikhekhe le-yoghurt i-strawberry
Izinhlobo zezandiso ze-eyelash
I-patties enenyama enobuthi
Izinkinga zezamabhizinisi nezomndeni